सीसीआरसी र जेभियर च्याम्पियन – खेल-खेलाडी
काठमाडौं (खेलखेलाडी) क्यापिटल कलेज एन्ड रिसर्च सेन्टर (सीसीआरसी) र जेभियर इन्टरनेसनल कलेजले दोश्रो रोज बड उपत्यकाब्यापी अन्तरकलेज बास्केटबल प्रतियोगिताको उपाधि जितेका छन् । सीसीआरसी ब्वाइज तथा जेभियर गल्र्समा च्याम्पियन बने । काठमाडौं (खेलखेलाडी) क्यापिटल कलेज एन्ड रिसर्च सेन्टर (सीसीआरसी) र जेभियर इन्टरनेसनल कलेजले दोश्रो रोज बड उपत्यकाब्यापी अन्तरकलेज बास्केटबल प्रतियोगिताको उपाधि जितेका छन् ।
सीसीआरसी ब्वाइज तथा जेभियर गल्र्समा च्याम्पियन बने । बुद्धनगरस्थित आयोजक रोज बडको कोर्टमा आइतबार भएको ब्वाइजको रोमाञ्चक फाइनलमा सीसीआरसीले गोल्डेनगेट इन्टरनेसनल कलेजलाई ५८–५५ को झीनो अन्तरले पराजित ग¥यो । सीसीआरसीका राजेश खनालले ६ अंक जोडे .तेश्रो क्वाटरको समाप्तिसम्म पनि सीसीआरसी ४१–४२ ले पछि थियो . पहिलो क्वाटरमा १४–१६ ले पछाडिको परेको सीसीआरसी दोश्रोमा भने १७–१४ को अग्रता लिन सफल भयो ।
तेश्रो क्वाटरमा सीसीआरसी फेरि १०–१२ ले पछाडि रह्यो . चौथो तथा अन्तिम क्वाटर सीसीआरसीले १७–१३ ले आफ्नो पक्षमा पार्दै उपाधि स’निश्चित ग¥यो . गल्र्सको फाइनलमा जेभियरले साइपाल एकेडेमीलाई ४१–१९ को फराकिलो अन्तरले हरायो . जेभियरको सहज जितमा शुष्मा गौतमले १९ अंक योगदान गरिन् .सुरुको क्वाटरमा ७–४ को अग्रता बनाएको जेभियरले अन्तिमसम्म अग्रतालाई जोगाइ राख्यो । जेभियरले बाँकी क्वाटरमा क्रमशः ६–१, ९–३ र १९–११ को प्रदर्शन ग¥यो ।
फाइनलका सर्वाधिक स्कोरकर्ताद्वय रोजेश र सुष्मा आ–आफ्नो विधामा ‘मोस्ट भेलुएबल प्लेयर’ घोषित भए । मंसिर ७ गतेदेखि सुरु प्रतियोगिताको ब्वाइजमा १६ टिमले लिग कम नकआउट आधारमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । गल्र्समा ४ टिमले राउन्ड रोविन लिग पद्धतिमा प्रतिस्पर्धा गरी शीर्ष दुई टिमले पुन फाइनल खेलेका थिए ।
प्रकाशित मिती- १७ मंसिर २०७४, आईतवार १५:०८
लेस्टरमाथी आर्सनलको शान, शीर्ष होडमा कायमै
म्यान सिटीलाई धक्का, न्युकासलसँग बराबरीमा रोकियो
नेपालले एसिया कप छनोटको तयारी श्रील‌ंकामा गर्ने
क्रोएसियामाथी पोर्चुगलको शानदार जित, फ्रान्सलाई एमबाप्पेले जिताए
लन्डन- यूईएफए नेशन्स लिग फुटबलअन्तर्गत शनिबार राती भएका खेलमा विश्व च्याम्पियन फ्रान्सले स्वीडेनलाई १-० गोलले हराएको ..पुरा पढ्नुहोस
Copyright © 2020 खेल-खेलाडी. All rights reserved.Designed: by Orange Tech.